EVY's Kitchen: Sponge Cake လုပ်ရင်သုံးတဲ့နည်း ( what is ribbon like stage)
Sponge Cake လုပ်ရင်သုံးတဲ့နည်း ( what is ribbon like stage)
ဒီနေ့တော့ sponge cake လုပ်ရင် သိထားသင့်တဲ့ မုန့်လုပ်နည်း တစ်ခုကိုမျှဝေပေးပါမယ်
မုန့်လုပ်နည်းတွေမှာ ညွှန်းတဲ့ ribbon like stage ဆိုတာလေးပါ။ ဘယ်လို အနေအထားကို အဲလိုခေါ်လဲဆိုတာပေါ့။
ပထမဆုံးVideo ဖြစ်လို့ အမှားပါရင် သည်းခံပေးကြပါဦး
Youtube မှာ တင်ပေးထားပါတယ်နော် Video
Posted by Evy at 1:26 PM
Labels: Baking, video guide, ဗဟုသုတ
မအိရေ .. youtube video တွေကို ဒီ page မှာပဲ ဖွင့်လို့ရအောင် embed လုပ်လို့ရပါတယ်။ "how to embed youtube video" ဆိုပြီး google မှာရှာလိုက်ရင် ရှိပါတယ်။
တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။
မမရေ ..ဟိုတခါမေးထားတဲ့ ကိတ်မုန့်ကြားနဲ့ အပေါ်မှာ cream ကောင်းကောင်းလေးတွေထဲ့ချင်တာလေ.. မမပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာ မတူဘူုးဖြစ်နေတယ်.. ချောကလက် chips ကို double boil လုပ်တယ်.whipping cream & butter ထဲ့တယ် .. butter များသွားလို့လားမသိဘူး cream က မွမွလေးမဖြစ်ဘဲ ချောကလက်ပြားကြီးထဲ့ထားသလို မာမာကြီးဖြစ်သွားလို့ .. အခုလို youtube vdo လေးနဲ့လုပ်ပြပေးပါနော်.. ကိတ်က တော့NTUC က cake mix ကိုဘဲလုပ်လုက်တာ . ကျေးဇူးနော်. ခရမ်းသီး ပဲငပိချက်လဲ ချက်ပီးသွားပီ... စားကောင်းတယ် .. ကျေးဇူး again :))